कतारमा किन हुन सकेन छिमिकी राष्ट्रहरुले गरेको नाकाबन्दीको अन्य ? - Himali Patrika
कतारमा किन हुन सकेन छिमिकी राष्ट्रहरुले गरेको नाकाबन्दीको अन्य ?
हिमाली पत्रिका २१ जेष्ठ २०७७, 4:23 pm
दोहा : खाडी राष्ट्र कतार र साउदी अरेबियाको अग्रसरतामा निर्मित गठबन्धनबीच बनेको तिक्ततापूर्ण शत्रुता यही शुक्रबार चौथो वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। यी दुई पक्षबीचको असमझदारी तत्कालै टुंगिने कुनै संकेत देखिएको छैन्।
जुन ५ मा साउदी अरेबिया र यसका गठबन्धन मुलुकहरुले एकाएक कतारसँगका सबै सम्बन्ध तोडेको घोषणा गरे।
यस घोषणामा कतारसँगको हवाई, सडक, सोझो सिपिङ र कुटनीतिक सम्बन्ध सबै तोडिएको कुरा उल्लेख थियो।
अरु मुलुकले पनि आफ्नै किसिमले कतिपय अवस्थामा सामान्य प्रतिबन्धहरु घोषणा गरे।
उक्त १३ बुँदे मागपत्रमा रियादको मुख्य दुश्मन इरानसँगको सम्बन्ध कतारले तोड्न आग्रह गरिएको थियो।
तर कतारले साउदी गठबन्धनका सबै माग अस्वीकार गरिदियो, किनभने कतारको भनाईमा यी मागहरु यथार्थपरक नभएका र कार्यरुपमा परिणत गर्न नसकिने थिए।
यस विभाजनले क्षेत्रीय यात्रामा जटिलता उत्पन्न गर्नुका साथै परिवारहरुलाई विच्छिन्न बनाएको छ भने कतारको व्यवसायमा लागत बढाएको छ।
सन् २०१७ अगष्टमा बिआउटक्यू नामको भूउपग्रहले फुटबल समेतका मुख्य कार्यक्रमहरुको साउदी दर्शकलाई ध्यान दिएर प्रसारण शुरु गरेको थियो।
कतारस्थित खेलकुद प्रसारक बीइनले साउदीले आफ्ना सामग्री अनधिकृत रुपमा प्रसारण गरेको आरोप लगायो। बीइन र साउदीबीचको यो विवाद अझै पनि कानुनी निरुपणको विषय बनेको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले कतारप्रति केही नरम र लचक रहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले कतारका शासक अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल–थानीलाई अप्रिल २०१९ मा ह्वाइट हाउसमा आमन्त्रण गर्नु भएको थियो, र त्यस भेटवार्तामा अल–थानीलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले “मित्र” भनी सम्बोधन गरेका थिए।
तर डिसेम्बर २०१९ मा कतारका अमिरले रियादमा आयोजित खाडी सहयोग परिषदको बैठकमा सहभागी हुन साउदी अरेबियाले गरेको निमन्त्रण अस्वीकार गरे। उनको साटो तत्कालीन प्रधानमन्त्री अब्दुल्लाह बिन नासेर बिन खलिफा अल–थानी बैठकमा सहभागी थिए।
फेब्रुअरी २०२० मा कतारका विदेश मन्त्रीले साउदी अरेबियासँगको वार्ता एक महिना पहिले नै स्थगन गरिएको जानकारी दिनुभयो, तर उहाँले साउदी अरेबियासँगका असमझदारी हटाउन वार्ता प्रयास जारी रहने बताए।
मे २८ मा कतारका विदेश मन्त्रीले एएफपीसँगको कुराकानीमा जिसीसी परित्याग गर्ने कुराको खण्डन गरे। तर उनले यस समूहको कार्यप्रति शंका व्यक्त गर्दै भने क्षेत्रको कुटनीतिक संकट समाधान गर्न यो संस्था पनि असफल भएको छ।